Ra�iisul Wasaaraha Dawlada ku meelgaadhka ah Xasan Abshir Oo Shil baabuur ku galay meel Nairobi 100 km u jirta.
Ra,iisul Wasaaraha TNG Xasan Abshir Faarax.
Nairobi,16 Feb 2003 - Ra�iisul wasaaraha Dawlada Ku meelgaadhka ah Xasan Abshir Faarax iyo xubno kale oo ka tirsan dawladiisa ayaa galabta shil baabuur ku galay meel 100 km u jirta magaalada Nairobi.
Warar deg deg ah oo naga soo gaadhay caawa magaalada Nairobi ayaa sheegaya in Mr Xasan Abshir ay shilkaasi ka soo gaadheen dhaawacyo kala duwan,wararka ayaa sheegaya in Xasan Abshir uu ka jabay gacanta,dhaawacyo kale yaa iyaguna ka soo gaadahay dhinaca dhabarka,waxaana si deg deg ah loogula cararay isbitaal ku yaala magaalada Nirobi.
Shilkan ayaa dhacay kadib markii gaadhiga Ra,iisul wasaaruha oo ku soo jeeda dhinaca magaalada Nairobi uu ku dhacay gaadhi weyn oo ah baabuurta xamuulka,ama Tareelaha,ugu yaraan 2 jeer ayaa baabuurka ra,iisul wasaaruhu islaba rogay.
Xoghayaha ra�iisul wasaaraha Axmed Aadan shiddo oo u waramay wariyayaasha ayaa sheegay in sida loo buun buuniyey shilka ku yimid Ra,iisul Wasaaraha ayan sidaa ahayn,dhaawaca soo gaadhay ra,iisul wasaarahana uu yahay dhaawac fudud,xaalada caafimaadka ee ra,iisul wasaarahana waa fiican tahay,mar dhowna wuxuu tegi doonaa Hoteelkii loogu tala galay.